एशियाकप क्रिकेटका लागि उन्नाइस खेलाडी छनोट,को को परे टोलीमा ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
एशियाकप क्रिकेटका लागि उन्नाइस खेलाडी छनोट,को को परे टोलीमा ?
काठमाडौं । मलेसियामा हुने एशियाकप क्रिकेटका लागि प्रारम्भिक चरणमा १९ खेलाडी बिहिबार छनोट गरिएको छ । नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटा र कप्तान पारस खड्काको टोलीले अनिलकुमार साह, वसन्त रेग्मी, विनोद भण्डारी, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, ज्ञानेन्द्र मल्ल, करण केसी, किशोर महतो, ललितसिंह भण्डारी, ललितनारायण राजवंशी, आरिफ शेख, प्रदीप ऐरी, रोहितकुमार पौडेल, सागर पुन, सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी, सुवास खकुरेल, सुनिल धमला र सुशन भारीलाई छनोट गरेको हो ।
अघिल्लो साता नेदरल्याण्ड्समा सम्पन्न पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय खेलका क्रममा घाइते शरद भेषवाकर प्रारम्भिक टोलीमा परेका छैनन् । नेदरल्यान्ड्सविरुद्धको एकदिवसीय खेलमा नरहेका सुनिल धमला, सागर पुन, विनोद भण्डारी, सुसन भारी र किशोर महतो प्रारम्भिक टोलीमा परेका छन्
बन्द प्रशिक्षण यही साउन २९ गतेदेखि शुरु हुने नेपाली क्रिकेट टोलीका व्यवस्थापक रमनकुमार सिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो । उक्त प्रशिक्षणबाट एशियाकपका लागि १५ सदस्यीय टोली घोषणा गरिनेछ । छनोट प्रतियोगिता आगामी भदौ ११ देखि २२ गतेसम्म मलेसियाम हुँदैछ ।
उक्त प्रतियोगितामा युएई, हङकङ, नेपाल, सिंगापुर, मलेसिया र ओमानबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । छनोट प्रतियोगितामा सहभागी ६ टोलीमध्ये शीर्षस्थानको टोली भदौ ३० गतेदेखि युएईमा हुने एशियाकपमा छनोट हुनेछ । उक्त प्रतियोगिताबाट छनोट हुने टोली एशियाकपको समूह ‘ए’ मा रहेका भारत र पाकिस्तानमा रहनेछ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले गाडी हुँदाहुँदै नयाँ गाडी किन्न किन खोज्दै छन् ?
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरूमा हजारौं सवारी साधन थन्किएका छन्। ती बिग्रेका र थोत्रिएका पनि होइनन्। तर […]
युभेन्ट्सको जित्ने यात्रा कायमै, मिलान पराजित
काठमाडौँ । गएराति भएको सेरिया ए मा युभेन्ट्सले एसी मिलानलाई २-० गोलले पराजित गरेको छ । यस सिजन अपराजित […]
म्यानचेस्टर सिटीको बर्चस्व कायमै
एजेन्सी । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटीले शीर्ष स्थानमा आफूलाई कायमै राखेको छ । आइतबार राति […]
चितवन राइनोजलाई पराजित गर्दै पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेटको उपाधि पोखरा पल्टनलाई
काठमाडौं । पोखरामा सम्पन्न भएको पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि पोखरा पल्टनले जितेको छ । […]
सन्दीप लामिछाने कारवाहीमा
पोखरा । विराटनगर टाइटन्सका कप्तान सन्दीप लामिछाने अम्पायरसँग विवाद गरेका कारण कारवाहीमा परेका छन् । पोखरा […]
अस्ट्रेलिया जानु अघि विध्यार्थीहरूले के के गर्नु पर्ला,महत्वपूर्ण जानकारी
सुनको भाउ तोलाको ६० हजार पुग्यो
“दुईतिहाईको धक्कु लगाउने सरकार पूर्णरुपमा असफल”
इटहरीमा भीषण आगलागी, करोडाैँको नोक्सानी